လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် နားလည်ပေးစေချင် | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် နားလည်ပေးစေချင်
သက်တန့်ရောင်အလံ အမှတ်တံဆိပ်လေးကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လို လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ရည်ညွှန်းကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။
သက်တန့်ရောင်အလံ အမှတ်တံဆိပ်လေးကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်လို လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ရည်ညွှန်းကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ၎င်းအမှတ်အသားနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘာလို့ လိင်တူ အချင်းချင်း ချစ်ကြတာလဲ? ယောကျာ်းနဲ့မိန်းမ မဟုတ်ဘဲ ဘယ်လိုလိင်ဆက်ဆံကြလဲ ? ဆိုတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုကိုသာ အရင်တွေးတက်ကြပါတယ်၊ သိလည်းသိချင်ကြပါတယ်။ ယခုလိုပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ LGBT တွေကို ကျောင်း၊ အလုပ်မှ စ၍နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဥပမာ- Apple CEO Tim Cook, အမျိုးသားအဆိုရှင် Sam Smith တို့လို နောက်ထပ်အများကြီးရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားခြင်း လိင်တူချစ်သူစုံတွဲတွေအကြောင်း လူတွေသိချင်ကြတဲ့ ယေဘူယျမေးခွန်းတွေကို Thiloyarmay ကဖြေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဂေးလ်ဖြစ်နေမှန်းဘယ်အချိန်က စသိတာလဲ ?
အဖြေ။ ။သင် အသက်ရူဖို့ ဘယ်အချိန်က စသိသလဲ ဆိုတာလိုမျိုးပဲ ဒီမေးခွန်းမျိုးက သူတို့လဲ ဖြေဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ သင်က အမျိုးသားတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်တယ်၊ သင်မေးလိုက်တဲ့သူက သင်နဲ့ ငယ်ငယ်တည်းကသိတဲ့လူဆို သူ စပြီး စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့သူက သင်ကိုယ်တိုင်လဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို သင်သိသွားလို့ ဘယ်သူ့ အတွက်မှ အကျိုးရှိသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၂) ဘယ်သူက ယောက်ျား? ဘယ်သူက မိန်းမလဲ?
အဖြေ။ ။ ကျားကျားယားယား ယောက်ျားနှစ်ယောက်က (အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်) သူတို့ဟာ ချစ်သူတွေပါလို့သင့်ကို ဝန်ခံပြီဆိုရင် ဒီအဆင့်မှာပဲ သင့် သိလိုစိတ်က ရပ်နေမှာ မဟုတ်ပဲ ထပ်သိချင်တဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် မမေးသင့်ပါဘူး။ သင်နဲ့ ရင်းနှီးနေရင်တောင် သူတို့ခြင်းသာ သိတဲ့ ကိစ္စအတွက် မေးတာမျိုးကို သူတို့လည်း ဖြေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုမေးမဲ့အစား မင်းတို့ရဲ့ RS ကဘယ်လောက်ခိုင်မှာနေပြီလဲ?ဆိုတာက သူတို့ကို သာမန်ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ ကန့်သတ်လိုက်တာ မဟုတ်သလို ယဉ်ကျေးတဲ့မေးခွန်းမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။
(၃) အသိတွေရှိတယ် မိတ်ဆက်ပေးရမလား ?
အဖြေ။ ။ ဒီစကားက သင်သာ သူနဲ့ ဆက်ပြီး ခင်မင်ရင်းနှီး ချင်သေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ မမေးသင့်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ သူကြိုက်တဲ့သူကို ရှာဖွေဖို့ သူ့မှာ သင့်အကူအညီမလိုသလို၊ မင်းနဲ့ လိုက်မယ့်ပုံစံ ငါ့အသိထဲမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားက သင့်ကိုယ်တိုင် သူ့လို လိင်တူ စိတ်ဝင်စားသူလို့ အထင်ရောက်သွားစေနိုင်မယ့် အတွက် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
(၄) သူတို့မကြိုက်တဲ့ နာမ်စား သုံးခေါ်ဝေါ်တာမျိုးရှောင်ပါ။
ကောင်မ၊ အခြောက်၊ အပုန်းမ စသဖြင့် အခေါ်အဝေါ်ရိုင်းတာမျိုးရှောင်ရမှာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် အမျိုးအစားခွဲ သုံးနှုန်းတဲ့ နာမ်စားမျိုးတွေကိုလည်း သုံးတာမျိုး မပြုလုပ်ဖို့လည်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသားချင်း စိတ်ဝင်စားရုံနဲ့ သူက မိန်းမဖြစ်ချင်သွားတာမဟုတ်သလို အမျိုးသမီးချင်းစိတ်ဝင်စားရုံနဲ့လည်း အမျိုးသားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ကြလို့ပါ။ လိင်တူစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သဘောထားခေါ်ပြောတာကမှ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြား အပြေလည်ဆုံး ဆက်ဆံရေးကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သူလဲ သေချာနားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကို နှမြောတာလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်ရင်း အပြန်အလှန် အငြင်းပွားနိုင်တာမို့ ရှောင်သင့်တဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူခြင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စက သင့်အတွက် နှမြောစရာကောင်းတယ်၊ ရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ သင်ထင်မြင်နိုင်ပေမယ့် ဒါကသင့်ဘဝမဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့ဘဝပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်က သင့်အိမ်နီးချင်းကို စိတ်ပူပေးတာမဟုတ်ဘဲ သက်သက်အပုပ်ချနေတာနဲ့ တူနေပါတယ်။
ဒီ အချက်လေးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ လိုအပ်သလို ကိုယ်ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မူကို နားလည်စာနာပေးရင်း ကောင်းမွန်တဲ့ မိတ်ဆွေစစ်မှန် အဖြစ် ရေရှည်ရပ်တည်သွားနိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ် ။ တစ်ကယ်လို့ သင်သာ လိင်တူ ချစ်သူ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို မေးခွန်းမျိုးက သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ဖူးသလဲ ဆိုတာကို comment ဒါမှမဟုတ် သိလိုရာမေး chat box မှာလာဝေမျှဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကို အောက်ပါလင်ခ့်တွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ https://bit.ly/2H0tsTJ